အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ နောက်ထပ် သည်းထိတ်ရင်ဖိုသရဲကား “အမျှ အမျှ” ရုပ်ရှင် Offical Trailer – XB Media Myanmar
ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့ မင်းသမီးချောလေး အိန္ဒြာကျော်ဇင်က သူမချစ်တဲ့ အနုပညာလုပ်င န်းတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်ကိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင်က အနုပညာ လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေရင်း သူမရဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို အချိန်မျှတစွာနဲ့ သာယာလှပေ အာင် တည်ထောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင်က သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးနဲ့အတူတူ သာယာလှပတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ထူထောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ အနုပညာအသစ်တွေကို စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် သည်းထိတ်ရင်ဖို သရဲကားကြီး “အမျှ အမျှ” က မကြာမီ အချိန်အတွင်းမှာ ရုံတင်ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“အမျှ အမျှ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးက ဒါရိုက်တာ စတီးလ်ရဲ့ လက်ရာဖြစ်ပြီး အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ ခန့်စည်သူ၊ လင်းဇာနည်ဇော်တို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုမိုလေး ပရိသတ်တွေအတွက် “အမျှ အမျှ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ Offical Trailer ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
“အမျှ အမျှ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ သမီးလေးတွေကို အရမ်းချစ်တဲ့ မိခင်တစ်ယောက် မမျှော်လင့်ပဲ ဝင်ရောက်လာတဲ့ အဖြစ်ဆိုးတွေကြား ဘယ်လို ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားခဲ့ရမလဲ? ဘယ်လို ခါးစည်းခံ ရင်ဆိုင်မလဲ? ဆိုတာ ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“အမျှ အမျှ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို လာမယ့် အောက်တိုဘာလ (၃) ရက်နေ့မှာ စတင်ရုံတ င်ပြသမှာမို့ ဆက်ဆက်စောင့်ကြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
Source: အမ်ွ အမ်ွ